Gaazexeessituu Beteliheem Taaffasee akka hojii gadhiistu maaltu taasise? - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsGaazexeessituu Beteliheem Taaffasee akka hojii gadhiistu maaltu taasise?
Af-gaaffiiwwan namoota bebbeekamoo waliin LTV irratti taasiftuun beekamtii kan horatte gaazexeessituu Beteliheem Taaffasee (Beetii)n hojii kana dhaabuu ishee BBC’tti himteerti.
(bbcafaanoromoo)—“Hojiin jaaladhu kana dhaabuudhaaf Kibxata galgala iyyata galfadheen ture. Roobii ganama iyyanni kiyya naaf mirkanaa’ee hojii kana LTV irratti hojjechuu dhaabeera” jetti.
Sagantaan LTV irratti qopheessaa turte kun dhiibbaa siyaasaa keessaafi alaan narratti akka dhufu taasiseera kan jettu Beteliheem, hojiin jaaladhu kana akkan dhiisuuf garuu dhiibbaan karaa waajjiraa narratti taasifamu nadirqamsiiseera jette.
Sagantichi qabiyyeewwan siyaasaarratti kan fuullefate ta’uun yeroo dheeraadhaaf doorsisamaa akka jiraattu gochuus himti.
“Torbee torbeedhaan alarratti gareen ani tuqameera jedhu gurmaa’ee doorsisa narratti raawwachaa ture. Warri akkanaa sagantichi Roobii galgala yoo darbe guyyaa muraasa jedhanii dhiisu. Suni bu’aa sagantichaati jedheen ilaala. Kanaaf, baayyee nan yaaddessuu ture; inumaayyu sagantaa itti aanu kan fooyya’e akkan dhiheessuf nakakaasa ture,” jetti.
Dhiibbaafi sodaachisni alarraa narratti taasifamu sadarkaan hojicha dhiisurraan nagahuu baatus dhiibbaan waajjirakoo keessaa saanticharratti taasifamu hojii kana akkan dhaabuuf nadirqisiisera jette.
“Sagantaan ani qopheessu kun dhaabbatichaaf daawwataa hedduu kan fidu ta’us manicha keessaa dhiibbaa guddaatu anaafi saganticharratti taasifama. Hunda amma himuuf garuu fedhii hin qabu, ” jetti.
Sababa sagantichaatiin duullis ta’e himanni dhufu hundi gara dhaabbatichaa osoo hin taane isheerratti kan fuullefate ta’uunis sababa biraa ta’uu eerti.
“Sagantaa kana jaalalaanin hojjedha. Ani kanin hojjedhus namoota sagaleen isaanii dhokfameef kan nama isaaniif dubbatu hin qabneefi jedhee waanin yaaduuf humnaa ol obseen hojjechaa ture. Amma garuu sadarkaa nuffisiisaafi abdii nama kutachiisurra waan gaheef dhiisee bahu filadhe.”
“Hojiikoo ittuman fufa”
Gaazexessaa Yaayyasaw Shimallis wabiin akka gadhiifamu ‘murtaa’e’
Dhaabbatichi ifatti gadhiisi naan jechuu baatus dhimmoota akkan gadhiisuuf nadirqamsiisan raawwachuun dhiibbaa narratti taasiseera jechuunis himatti.
Sagantaan kun dhimmoota siyaasaa irratti fuulleffata waan ta’eef, haala siyaasa Itoophiyaa jiru waliin sagantaawwan akkanaa hojjechuun qorumsa cimaa ta’uus eerti.
Dhiibbaawwan alaafi yaalii ajjeechaa…
Gaafa sirna awwaalcha Itaamaajor Shuumii Raayyaa Ittisa Biyyaa Jeneraal Sa’aaree Mokonnin Maqalee akka turte kan himtu Beeteliheem, guyyaa sana yaalii ajjeechaatu narratti raawwatame jetti.
“Guyyaa sana na ajjeesuuf yaalameera. Hokkora cimaadhaanin bahe. Guyyaa sana ummta baayyeetu bahe. Mormii cimaas dhageessisaa turan. Mormii siyaasaa sana keessatti akkuma tasaa gaafa na argan hokkora cimaatu ka’e. Itti yaadamee miti garuu nu miitee jirti jedhanii waanuma yaadaniif,” jetti.
Duulli maqa balleessiifi arrabsoon karaa miidiyaa hawaasummaa bifa qindaa’een taasifamus yaaddoo kan biraa ta’uu ibsti.
Yeroo dhihoon asittimmoo marsaalee hawaasummaa dhuunfaa fayyadamtu cabsanii waan ofii barbaadan gochuun haalan ishee yaaddessaa dhufuu himteetti.
Shakkii gartuuf looguu…
Hojiiwwan sagantaa hanaan hojjetturratti namoonni gartuu siyaasaa yookan gartuu saba tokkoof loogdi jedhan nijiru.
Dhimma kanarrattis,”Ani saba Oromoo keessaa ba’us saba kiyya garmalee jaaladhus addatti saba kanaaf waan looge hin qabu. Hoggantoota siyaasaa gurguddoo sabichaa yeroon dhiheessee gaaffii jajjabduu gaafadhu sabichi natti hin mufanne. Kanaafuu, anis abbaa kiyyaafis hin loogu, siyaasan loogufis hin qabu,” jetti.
Namootni hedduun garuu nama isaanii sababa gaaffilee jajjabduu gaafadheef yookan saba kanaaf loogdi jedhu, yookan ammoo mootummaa amma aangorra jiruuf loogdi yoo jedhan dhagahuu dubbatti.
Karoora gara fuula duraa…
Hojii LTV waliin hojjechaa ture kanaan walfakkaatu eessattiifi yoom kan jedhu beekuu baattus yeroo aara galfii muraasaan booda hojjechuuf akka fedhii qabdus himteetti.
” Miidiyaan walabaa yookan kan naqacaruu barbaadu argamnaan hojjechuu nan barbaada. Hanga ammaatti garuu kan nagaafates kanin waliigales hin jiru. Hojii miidiyaatiin alatti waanin jiraadhus natti hin fakkaatu. Hojiin akkanatti jaaladhus hin jiru.”
“Ani saba Oromoo keessaa ba’us, saba kiyya garmalee jaaladhus addatti saba kanaaf waan looge hin qabu.
Gaazexeessituu, Beteliheem Taaffessee
Fuula duratti namoota dhuunfaa sagaleen isaanii dhokfame, amantiiwwan miidiyaarraatti dhiibamaniifi saba Oromootiif sagalee taatee hojjechuuf karoora qabaachuus BBC’tti himteetti.
Dhimmoota Gaazexeessituu Beeteliheem Taaffeseen kaasterratti manaajera waliigalaa LTV Aadde Wubet Raggaasaa biilbila kaasanii dhimma barbaadneef erga itti himnee ”booda nadubbisaa” jedhanis ergasii irra deddeebiin bilbillus bilbila kaasuuf hayyamamoo hin taane.
Breaking: More than 147, which is the majority, have stromed out of a coucil session in Jigjiga
Oromiyaa: Dodolaatti alaabaa Oromoo jigsan. Ni callifame. Amboottis kanuma godhame.